Iglasi Anti-screen pro ...
Isikrini seglasi esimnyama esiluhlaza ...
I-3 D egcwele iglu enobushushu ...
UMkhuseli oGcweleyo weScreen ...
2.5D isilika yoshicilelo gl wobulali ...
I-iPhone 13 2.5D iflethi ecacileyo yokukhusela isikrini
Ifaka isicelo: isixhobo esilahla amanzi kwiscreen seflethi, hayi isikrini esigobileyo.
i-iPad, i-iPhone, i-Samsung, iHuawei, njl.
Umkhuseli weScreen se-Glass ye-1313 yoThuli
I-iPhone 13 PET + iGlass Edge Crash Proof Screen Protector
I-iPhone13 yomkhuseli wesikrini oqhelekileyo iya konakaliswa ngokulula, yona wenza isikrini sonakaliswe ngokulula kwakhona. Ngaphandle koko, ukuva nelizwi kuya kwenziwa sisikhuselo esipheleleyo somkhuseli.
Uthuli ubungqina bokuba nguMkhuseli weScreen se-iPhone13
Umkhuseli wesikrini okhuselweyo othembekileyo we-iPhone13 usebenzisa inkqubo eyahlukileyo yokukrola i-laser kunye nenkqubo yemichiza. Yahlukile kwisinyithi sendabuko okanye uthuli lweplastiki olunemingxunya yobungqina. Ayitofwanga ngeglu. Kwaye umngxuma wobungqina bothuli uqunjelwe ngqo kwiscreen sokukhusela iglasi.
Iphepha elinokuchaphazeleka elinokuphinda linikezelwe njengoMkhuseli weScreen
Iphepha elinokuphinda lisebenze liziva likhusela isikrini ngokuhambelana Zonke iimodeli ze-iPad kunye neetafile. Iyahambelana nePensile yeApple okanye ezinye iipeni ezisebenzayo zeStylus. AI-nano ye-nano itekhnoloji yokuncamathisela izinto, qinisekisa ixesha elide lokugqibela elinokuphinda lisetyenziselwe ukuphinda lisetyenziswe, ibhabhule simahla kwaye kube lula ukufakwa.. Ke unokuyibeka xa ufuna ukwenza iphepha kwiphepha le-iPad, emva koko ulisuse kwaye ulifake kwifolda yokugcina xa ukwezolonwabo.
Ukwaziswa kweTitanium 720 ° Guard
UKeja uhlaziyiwe 720o Khusela TM uguqula umgangatho wezinto ze Ingxubevange Titanium ebonelela ngokhuseleko olomeleleyo. Ukongeza, iTitanium720o Khusela yakhiwe kwisiqwenga se intsimbi enothuli ubungqina kwindawo yenotshi yokuthintela uthuli ukungena kumngxunya wesithethi. Isakhelo seTitanium siqhubekeka ngesingxobo se-elektroniki. Imveliso yonke ibukeka intofontofo kakhulu kwaye ilungile.
I-2 kwi-1 yeglasi enomsindo + nephepha le-PET njengomkhuseli wesikrini
Ezi mveliso kukungeniswa kwe-patent ye-KEJA ye-iPad, iTafile / ukhuseleko kwithebhu. Iqulethwe ngamanqanaba amabini. Enye iglasi kwaye enye yiPET. I-PET yeyamaphepha afana nokubhala kunye nokunxiba okungaphezulu kwepen. Uluhlu lweglasi yokuchasana nefuthe kunye nokhuselo olomeleleyo.
Esi sikhuseli sokukhusela imitha eluhlaza okwesibhakabhaka sihluza ukukhanya okuyingozi kwibhanti 380-400NM.
Ukuthintela ngokufanelekileyo ukwenzakala ekukhanyeni okuluhlaza okwesibhakabhaka.
2 kwisikhuseli sekhusi esi-1
Ifowuni yemart ixesha elingaphezulu kwexesha iza kuba nkulu kwaye inkulu. Kwimeko, ukusebenza ngesandla esinye kunzima ngakumbi nangakumbi. Ke, abathengi bafuna ityala elincinci kakhulu kwaye likhaphukhaphu. Kwelinye icala, ukubonisa ukukhuselwa kwesikrini kukuxhalabisa ngonaphakade. Ngaba sikhona isisombululo sokudibanisa iimeko kunye nescreen ukwanelisa ukuthengwa kokumiswa komsebenzisi?
Umkhuseli weScreen se-iPhone 12 Pro / i-iPhone 12 kulula ukuyifaka kunye ne-Bubble yasimahla, ifilimu ekhanyayo yeGlasi yefilimu e-7/8, i-4.7-intshi, ifilimu yokukhusela iglasi ye-iPhone 8, 7, 6S, 6 (4.7 intshi)
Isikhuseli seglasi esicacileyo sobushushu beGlass ye-2.5D ehambelana ne-iPhone epheleleyo kunye naphantsi kwe-intshi ye-7 yonke ifowuni ephathekayo. Kwimarike, isikrini sakho siqinisekisiwe ukuba siyasinda nokuba siwela kubude be-6Ft (1.8 yeemitha) ukuya kumhlaba onzima. Okwangoku, inokumelana noxinzelelo lwe-10x yesinye isikhuseli esinexabiso eliphantsi.
Umkhuseli wescreen se-iPad kunye neetafile, iglasi ye-9H Cacisa ifilimu ekhuselayo yeglasi ye-iPad Pro 11-intshi / i-iPad Air 10.9, i-iPad (9.7-intshi, imodeli ka-2018/2017), i-iPad Air 1, i-iPad Air 2, i-iPad Pro
I-2.5D iflethi ecacileyo ye-HD yePremium Crystal 9H 0.33mm iglasi, esetyenziselwe isixhobo esilahla amanzi kwiscreen seflethi, hayi isikrini esigobileyo.
Ukubandakanya i-Ipad, ithebhulethi ye-SUMSUNG, iHuawei / xiaomi PAD njl.
ilungele i-iPad kunye neetafile ze-7-11 intshi.Ukungabinathuli, iminwe ngaphandle kwe-bubble, i-Anti-Scratch Shatterproof, ukufakwa ngokulula komkhuseli weGlasi yeScreen.